ANTANANARIVO SY NY MANODIDINA : Basy mahery vaika miisa 53 tra-tehaka,401 ny trangana fanafihana
Nivaivay ho an’Antananarivo sy ny manodidina ihany koa ny tsy fandriam-pahalemana nandritra iny taona 2016 lasa teo iny. 12 janvier 2017
Ankoatra ny fakana an-keriny sy ny vono olona tetsy sy teroa dia tena isany nanjaka sy nahazo laka tanteraka ny fanafihana mitam-piadiana nataon’ireo jiolahy.
Maro an’isa ny tranga voarain’ny teo anivon’ny Polisim-pirenena, isak’alina dia tsy latsaky ny roa ny isan’ny tokantrano voatafika ao anatin’ireo Boriborin-tany valo mandrafitra an’Antananarivo.
Araka ny tatitra voaray dia miisa 401 ny trangana fanafihana nisy teto Antananarivo sy ny manodidina, ary miisa 730 kosa ny vaky trano. Nisy tamin’ireo fandrobana ireo no voasoroka mialoha rehefa nahazo ny fampitam-baovao avy tamin’ny olona tsara sitra-po ny Polisy ary nisy kosa no nahalasan’ireo mpanafika vola sy fitaovana maro. Ankoatra izay nanao ny ainy tsy ho zavatra ihany koa ny Polisy tamin’ny fanenjehana ireo olon-dratsy satria nisy ny fisafoana natao andro aman’alina nanenjehana ireo olon-dratsy.
Nandritra iny taona lasa iny dia jiolahy an’arivony maro no voasambotra, ny 2053 tamin’ireo no naiditra am-ponja avy hatrany rehefa noentina teo anatrehan’ny Fampanoavana ny raharaha. Basy mahery vaika kalaky sy poleta miisa 53 no tra-
tehaka izay fampiasan’ireo jiolahy mandritra ny fanafihana.
Nanambara ny avy eo anivon’ny Polisim-pirenena fa tsy hikely soroka izy ireo, hiezaka hatrany mba hametraka paik’ady vaovao hanenjehana ireo olon-dratsy, hametrahana fandriam-pahalemana maharitra ho an’ny mponin’Antananarivo sy ny manodidina. Mankasitraka ireo olona tsara sitrapo tamin’ny fanomezam-baovao rehetra ary mbola manantena ny fiaraha-miasa eo amin’izy ireo ihany koa.
Rava ny ny « bandes des 7 »
Tambazotra iray ivondronan’ireo jiolahy mpanao fanafihana mitam-piadiana mahery vaika ihany koa no ravan’ny Polisy teny Androndra, ny alarobia lasa teo. Raika lahy tamin’ireo jiolahy no maty voatifitra ary dimy hafa kosa voasambotra. Natolotra ny Fitsarana, omaly, avokoa izy rehetra ireo ary avy hatrany dia naiditra am-ponja vonjimaika. Loharanom-baovao azo avy tamin’ny olona tsara sitrapo ihany no nahatonga ny Polisy tonga ara-potoana teny an-toerana nanao ny fidirana an-tsehatra ka izao nahitam-bokany izao.